Maxay Salka Ku Haysaa Colaadda Canfarta Iyo Soomaalida?.
Wednesday July 28, 2021 - 09:11:44 in News by Hadhwanaag News
"Ilaa hadda lama hayo khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay colaaddan."
Dagaal ayaa maalmahan ka socday duleedka degmada Garba-ciise, kaas oo u dheexeeya Soomaalida iyo Canfarta, sida ay BBC u sheegeen dad goob-joogayaal ah oo ku sugan aagga uu dagaalka ka socda.
Wararka waxay intaa ku darayaan in dagaalkan uu u dhexeeyo xoolo dhaqatada Soomaalida ah iyo maleeshiyo ka soo jeedda deegaanka Canfarta.
Ilaa hadda lama hayo khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay colaaddan.
Magaalada Garba-ciise waxay dhacdaa jidka isku xira Itoobiya iyo Jabuuti.
Shalay ayay aheyd markii xukuumadda deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ay sheegtay inay difaaci doonto dadka Soomaalida ah ee deggan aagga Garba-ciise iyo deegaannada ku xeeran.
Hadalkan ayaa imaanaya kaddib dagaal Sabtidii la soo dhaafay ka dhacay aaggaas oo la sheegay inay ku dhinteen Soomaali badan, kaddib markii ay weerrar soo qaadeen dagaalyahanno lagu tilmaamay inay ka tirsan yihiin ciidanka maamulka deegaanka Canfarta
Soomaalida iyo Canfarta ayaa marar badan ku dagaallamay deegaannada ay ku muransan yihiin sida Candhuufa, Cadheyti, Garba-ciise iyo tuulooyin kale oo ku yaalla soohdinta ay wadaagaan labada deegaan.
Iyada oo ay taagan tahay colaadda labada deegaan oo aan xal waarana laga gaarin sheegashada dhulka la isku hayo, ayaa waxaa xaaladda sii huriyey guddiga doorashooyinka dowladda dhexe ee Itoobiya oo soo saaray go'aan ah in 8 tuulo oo xadka labada deegaan ku teedsan iney doorasha ka dhaceyn shacabka degganna ay codkooda ka dhiibtaan tuulooyinka u dhow ee ay gaari karaa.
Go'aanka guddiga doorashooyinka ayaa waxaa si weyn uga biyo-diiday maamulka dowlad deegaanka Soomaalida iyaga oo qoray warqad ay ku sheegeen iney marnaba aqbaleyn dhul uu deegaanka Soomaalida leeyahay in deegaan kale la hoos geeyo.
Deegaanka Canfarta ayaa dhankoda waxay ku doodayaan in tuulooyinka 8-da ah uu guddiga doorashooyinka go'aanka ka gaaray la hoos geeyo dhankooda doorashada soo socotana ay uga dhacdo deegaankaasi.
Guddiga doorashooyinka dowladda dhexe ee Itoobiyana go'aanka ayaa go'aanka uu gaaray ku sababeeyay in inta xal waara laga gaarayo qaddiyadda tuulooyinka ay maamullada labada deegaan isku haystaan, inuu xal u arko labada deegaanba iney halkaasi doorasha ka sameyn si looga gaashaanto isku dhac dambe oo yimaaddo.
Xukumaddii deegaanka Soomaalida ka arrimineysay uu hoggaaminayey madaxweyne Cabdi Max'uud Cumar ayaa tuulooyinka Cadhuufo, Caddeeyto iyo Garbo-ciise waxay siisay deegaanka Canfarta iyada oo loo qoray warqad rasmi ah oo dhulkaasi Canfarta lagu hoos geynayo.
Hase yeeshee golaha wasiirrada ee deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya uu hoggaamiyo Mustafe Cagjar ayaa horay u laalay heshii ay dowladda dowladda dhexe ee dalka Itoobiya taageereysay oo deegaanada Cadhuufo, Caddeeyto iyo Garbo-Ciise oo ka tirsanaan jiray dhulka Soomaalida Itoobiya lagu hoos geeyay maamulka Canfarta balse tan iyo xilligaasi ay dhacayeen rabshado u dhaxeeya Soomaalida iyo Canfarta.
Colaaddan oo deegaankaasi ka taagneyd labadii sana ee la soo dhaafay waxaa ku naf waayey dad ka badan 400 iyada oo hanti aad u bandanna ay ku burburtay.
Bishii April ee sanadkan ayaa waxaa mar kale magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya lagu soo gabagabeyay wadahadal u dhaxeeyay madaxweynayaasha dowlad deegaannada Soomaalida iyo Canfarta, kaas oo xal loogu raadinayay dagaallo maalmihii la soo dhaafay labada qoomiyadood ku dhaxmaray qaybo ka mid ah gobalka Siti.
Balse sida iminka muuqata heshiiskaasi ma noqon mid sidii loogu talagalay u dhaqangala.